Tsy raharahaina, tsy ilaina, tsy omena famelàna · Global Voices teny Malagasy
Andron'ny Fandresena, ezaka hakàna sy hamerenana indray ny sain'ny daholobe ho amin'ny fotoanan'ny ady.
Voadika ny 27 Desambra 2021 11:55 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, українська, Español, Esperanto , Français, English
Fankalazana ny Andron'ny Fandresena tao Baku. Pikantsary avy amin'ny lahatsary tatitry ny Azernews.
Ity lahatsoratr'i Bahruz Samadov ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny OC Media. Dika iray nokiraina no averina avoaka etoana eo ambanin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
NY 5 Novambra, nandritra ny fankalazana ny Andron'ny Fandresena — andro iray vaovao fialantsasatra natao hankalazana ny fandresen'i Azerbaijan tamin'ilay Ady Faharoa tao Nagorno-Karabakh tamin'ny 2020 — andian'olona iray no azo sary niravoravo tao afovoan'i Baku, sady nihorakoraka teo am-pandoroana ny saina armeniàna. Eo ambany fitondrana iray tsy refesimandidy ao Azerbaijàna, toy ny tsy azo noeritreretina ny famoriana olona marobe sy misahotakotaka tahaka izany any afovoan'ny renivohitra — saingy toy ny nandritra ilay fifandonana rahateo, io endrika fanehoankevitry ny vahoaka io dia tsy hoe fotsiny leferina, fa amporisihana.
Ny famoronana ny Andron'ny Fandresena ho toy ny fialantsasatra ho an'ny daholobe dia natao hakàna sy hitahirizana tsy ho lefy ny fihetsehampon'ny vahoaka nandritra ny vanimpotoanan'ny ady, fony ny firenena manontolo tena niara-nirona fatratra nanohitra ny fahavalo avy any ivelany. Mba hankalazàna ny fandresen'i Azerbaijàna tamin'ilay ady, mamerina io angovo io ny Andron'ny Fandresena. Mandritra izany fotoana izany, voafàfa tsara tsy ho hita ireo fanehoankevitra / fitantaràna tsy mifanaraka amin'izay toepo miravoravo izay.
Kanefa, na dia nahavita nibahana ny adihevitry ny rehetra aza ny fitantaràna miabo manodidina ny Andron'ny Fandresena, dia tsy maintsy nisy fetrany ihany.
Misy ifandraisany amin'ireo tena vondrona pôlitika sy ireo hasosorana tsy afaka ny hohadinoina fotsiny ireny kabary tsy mpanara-drenirano sy tsy mankalaza ireny. Ary na vitan'ny fanjakàna aza ny nanilika ireo mpanohitra nandritra io andro fialantsasatra io, noporofoin'ireo fifandonana vao haingana nisy tamin'i Armenia sy Azerbaijàna fa sarotra kokoa ho azy ny hampiasa io fitantaràna io ho entina manetsika ny vahoaka mba hitodika amina hetsika ara-tafika bebe kokoa.
Ny fandresena tamin'ilay Ady Faharoa tao Nagorno-Karabakh dia manamarina sahady ilay finoana malaza manao hoe tsy nilaina ireo fifampiresahana fandriampahalemana nifanaovana tamin'i Armenia ary nilaina sy tsy azo nialàna ny ady. Vokany, tsy zavatra tsy nampoizina ilay ady ary ho an'ny ankamaroan'ireo Azerbaijaney dia tsy nitambesatra loatra tao an-tsaina ny sàndany ara-olona.
Hatramin'ny nifaranany, tsy mahagaga àry raha toa tsy dia tazana loatra ny fianakavian'ireo maty nandritra ilay ady. Mety nitondra fifangarihan-javatra mahamenatra loatra amin'ilay firavoravoam-bahoaka nokarakarain'ny fanjakana raha toa ka nanatrika teo ny ray aman-dreny, ny zanaka ary ireo vady nidonam-pahoriana.
Nahilika ihany koa tsy ho ao anatin'ny fitantaràna ny Andron'ny Fandresena ny tsy fahafahampon'ireo bekotro maroholatra, zava-mahazatra anaty fiarahamonina taorian'ny ady. Ireny lehilahy ireny, izay hobiana amin'ny fomba manjavozazo any anaty hira, kabary ary mandritra ireo lanonana ho an'ny daholobe, dia mazàna no mahatsapa manokana ho tsy raharahaina sy atao tsy misy vidiny, na avy amin'ny fanjakàna izany, na avy amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Izay indrindra, feno lahatsary miraradraraka, nalefa an-tambajotra sy nozaraina, amin'ny ankamaroany dia any amina pejy tantanan'ireo mpanohitra, ahitàna ireo bekotro maroholatra mitaky fanampiana sy fanohanana hafa ara-pitaovana mba hiatrehan-dry zareo ny isambolany.
Ny lahatsary iray lasa niparitaka be ao amin'ny TikTok, momba ilay Andron'ny Fandresena, no tena ohatra iray amin'io tranga io. Ilay lahatsary, izay mpandalo no nandrakitra azy, dia mampiseho bekotro maroholatra iray manao fanamiana ary mipetraka ao anatin'ny fiarany sy mifandahatra amin'ireo manamboninahitry ny pôlisy izay nitaky ny hanisàhany ny fiarany, raha ireo olona nitangorona kosa mitazana izany.
Rehefa niparitaka be io lahatsary io, namoaka fanambaràna ofisialy momba ilay resaka ireo mpitandro filaminana sy mpandrindra fifamoivoizana, tamin'ny filazàna fa raha toa “mirehareha amin'ireo bekotro maroholatra eto amintsika” izy ireo amin'ny fitondrantena sasantsasany, manamaloka io sata io ry zareo [bekotro maroholatra].”
Na tohizan'ireo mpanohitra aza ny fanakianana ireo fifanarahana taorian'ny ady ho toy ny “fandresena ampahany” ihany, noho ireo tafika rosiàna mampandry tany naparitaka ao amin'ny faritr'i Nagorno-Karabakh, ho an'ny olontsotra dia nandresy ilay fitantaràna ny Andron'ny Fandresena. Raha ny fomba fijerin'ny vahoaka, tapitra ny ady, ary efa voaverina sahady ny rariny.
Ao anatin'ny famirapiratan'ny nasiônalista amin'io fandresena io, tsy misy mihitsy marika hoe irian'ny vahoaka ny hitohizan'ny hetsika ara-tafika — na eo aza ny fankahalàna lalimpaka an'i Armenia. Noho io antony io indrindra, herintaona lasa izay, tsy nisy na dia tampihana fanohanana kely avy amin'ny vahoaka aza ho an'ny ady tamin'ireo fifandonana nahery vaika tany akaikin'ny sisintany. Fa ny mifanohitra amin'izay, tsy fahatakarana no naterak'ireo fifandonana, ary nampametra-panontaniana vaovao fotsiny ihany.
Raha ny kabary irredentist adaladala (fanamarihan'ny mpandika: irredentist, kabary pôlitika mirona amin'ny fakàna ampahan-tany ho araikitra amin'ny an'ny tena) no mety holalaovin'ny governemanta azerbaijaney, toy ny fitakiana an'i Yerevan na fandrahonana hanokatra lalantsara an'habakabaka hamakivaky an-kery an'i Armenia Atsimo, tsy dia misy akony eny anivon'ny vahoaka izany.
Ary araka izany, ireo fifandonana vaovao nipoaka herinandro iray monja taorian'ilay Andron'ny Fandresena dia tsy hafanam-po feno fitiavan-tanindrazana no nandraisana azy, fa feo marobe niakatra nanohitra ny mety hisian'ny ady vaovao indray. Na teo aza ireo fankalazana nakotroka sy ny fientanentanana nandritra ny Andron'ny Fandresena, ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka dia tonga saina hoe nitontongana ny ara-toekarena noho ny ady ary tsy tontosa ireo fiovàna ara-drafitra nandrandrain'ny fiarahamonina sivily.
Tsy midika izany hoe ireo “toepo tsy mankasitraka ady” dia teraka avy amin'ireo fijery faobe momba ny maha-olombelona, na hoe fiaraha-mizaka ny mavesatra. Ireo lahatsary nahitàna ireo miaramila armeniàna babo an'ady farany teo, nodarohana sy nolevilevena mafy, dia fahanginana tanteraka teny anivon'ireo Azerbaijaney “mpiaro zon'olombelona” no mba naterany. Angamba ny fiarahamonina Azerbaijaney mety leo ady, saingy mbola mijanona ho “ilay iray hafa hàlako hatramin'ny tsinay maintiny” ry zareo Armeniàna.
Tsy omena famelàna
Ankoatra ireo kabarim-panjakana mibahan-toerana ara-pôlitika momba ilay fankalazàna ny fandresena, dia tonga amin'ny fetra tsy mbola nisy toa azy amin'ny tsy fitarihana ny vahoakany ho amin'ny resaka pôlitika i Azerbaijàna.
Hatrizay, tsy mbola osa sy tsy nasiana hajany tahaka izao ireo antoko mpanohitra, na inona na inona endrika fitiavan-tanindrazany. Ohatra, zara raha nahazo fanohanana, na fanehoana firaisankina ny fitokonana amin'izao fotoana izao tsy hisakafo ataon'i Saleh Rustamli, bekotro maroholatra tamin'ny Ady Voalohany tao Nagorno-Karabakh, gadra pôlitika, ary mpikatroka avy amin'ny antoko mandatehezam-bahoaka (PNFA).
Mandritra izany fotoana izany, mihamaro ireo mpanohitra nahiditra am-ponja. Tany am-piandohan'ny Novambra, Agil Humbatov, mpikatroka iray hafa avy amin'ny PNFA, no nohelohina 10 taona an-tranomaizina noho ny vesatra mampametra-panontaniana iampangàna azy ho nanao fanafihana mitam-piadiana. Volana iray talohan'izay, Niyammed Ahmedov, iray hafa mpikambana ao amin'ilay antoko ary mpanohana mavitrika an'i Ali Karimli, mpitarika ny PNFA, no nohelohina 13 taona noho ny vesatra fiampangàna azy ho mpanohana ara-bola ny asa fampihorohoroana.
Hatreto, tonga amin'ny haavo farany ambony amin'ny laza sy ny fahefana ny governemanta azerbaijàney — nefa atahorany mafy ny mety hiovàn'izany indray andro any.
Raha fehezina, mila ho sempotry ny fitantaràna manodidina ny Andron'ny Fandreseana ireo kiana rehetra tafiditra ao anatin'ny lafim-piarahamonina azerbaijaney tsirairay, nefa koa marefo izy. Ny herisetra an'ady lazainy fa vitany ny nanatsahatra azy dia niverina nipongatra indray toa anatin'ny andro vitsy nisian'ilay fialantsasatra. Marobe ireo bekotro maroholatra, izay ara-kevitra fotsiny no ankalazan'ny fanjakàna azy ireo, no mangenahenan'ny hasosorana. Ny vahoaka, faly noho ny fiverenan'ny fireharehany amin'ny tanindrazany teny an-tanin'ady, toa tsy mankasitraka loatra ny hanao sorona handatsahan-drà bebe kokoa indray.
Zeorzia: Mpanao gazety ela nihetezana voaheloka higadra 3,5 taona
Zeorzia 1 andro izay